Ụlọ ọrụ nwa teether |Ndị China Baby teether Ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ya
Baby chewable silicone beads teether mgbaaka teething mgbanaka rattle baby teether chaplet silicone
Nchekwa 100% maka ụmụ ọhụrụ- Ndị na-eze nwa na-eji nri sitere n'okike dị ọcha-ọkwa silicone na pigmenti eke, dị nro, na-adịgide adịgide, na enweghị BPA.Ihe nchekwa na dị nro agaghị emerụ ọnụ nwa ahụ, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka nchekwa nwa.
Ihe mgbanaka nzịrị ụmụaka mkpụrụ osisi egusi Silicone na-ata ezé nwa ụmụaka ihe egwuregwu ụmụaka
1.Ihe eji egwuri egwu siliki nwere ike mee ka obi dajụọ ma kpalie chịngọm nwa, belata ihe mgbu, ma nyere ezé ọhụrụ aka itopụta.Onye na-eto eto bụ ihe egwuregwu ụmụaka ga-eji zụọ eze nke ọma maka ha.
2.Easy ihicha - ihe nchekwa efere (n'elu rack) na friza enyi na enyi, ma ọ bụ na-asa ya na ncha dị nro na mmiri ọkụ, kpochaa ma hichaa ya na akwa nhicha dị ọcha, ihe egwuregwu ụmụaka silicone a dị mfe ihicha.
3.100% Nchekwa - 100% nri-ọkwa silicone ihe.Ọ dị mma maka ụmụ ọhụrụ.nri ọkwa silicone teether
Ihe ụmụaka ji egwuri egwu mmiri na-adịghị ahụkebe N'ogbe dị elu Silica Gel Material Food Grade nwa ihe egwuregwu ụmụaka
Ihe nke ngwaahịa anyị bụ silicone nri n'efu 100% BPA.
Ọ naghị egbu egbu kpamkpam, FDA/SGS/LFGB/CE kwadoro ya.
N'ihi na anyị na-ere ngwaahịa maka ụmụ ọhụrụ iji, anyị maara ka ọ dị mkpa maka ngwaahịa nchekwa.
Anyị nwere ihe siri ike chọrọ maka ịdị mma, anyị nwekwara nyocha atọ dị mma.
N'ikpeazụ, Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, Ya mere, anyị nwere ike ịnye gị ọnụahịa kachasị mma na ọrụ ọkachamara.
Aka Jide Nwa Mbe Ọhịa nha nha nha ụmụaka amụrụ ọhụrụ na-ata ihe ụmụaka ji egwuri egwu silicone ezé nwa.
Ọgwụ dị nro na nke na-agbanwe agbanwe - N'adịghị ka ihe ụmụaka ji egwuri egwu ndị ọzọ siri ike ma sie ike, a na-eji nlezianya mee ndị na-ege ntị Speric na ederede zuru oke maka ịta na ime ka nwa nwa gị dị jụụ.Nyere obere gị aka ka ha jiri iberibe mma mara mma gabiga oge ndị ahụ siri ike.
Giraffe nwa akwa kpọgidere ihe ụmụaka ji egwuri egwu Pendant Silicone Baby Soft Wholesale Quantity Teething Toys Silicone funny giraffe baby teether
Ihe nchekwa - silicone ọkwa nri 100%, anaghị egbu egbu, FDA guzoro BPA n'efu.
Ihe dị nro na nke na-agbanwe agbanwe na-ebelata ihe ize ndụ nke mmerụ ọnụ.